Bukayo Saka Oo Farriin U Diray Jack Wilshere Kaddib Markii Uu Sheegay ‘Inuu Ka Fiirsanayo Hawlgabnimo’ – Garsoore Sports
Bukayo Saka Oo…
Da’yarka Arsenal Bukayo Saka ayaa maamuusay Jack Wilshere kaddib markii laacibkii hore ee qadka dhexe ee Arsenal uu shaaca ka qaaday inuu ka fikirayo inuu ciyaaraha ka fariisto isagoo 29 jir ah.
Wareysi ballaaran oo uu siiyay The Athletic toddobaadkan, Wilshere ayaa qirtay inay ku adkaatay inuu helo dhiirrigelin uu kusii wato xirfadiisa ciyaareed isagoo awoodi waayay inuu qandaraas la galo koox cusub xagaagan.
“Waxaan soo kacayaa subaxdii waxaanan ku fikirayaa,‘ sax, waxaan u baahanahay inaan tago oo aan meel ku tababarto ’, ayuu yiri Wilshere.
‘Caadi ahaan waa kaligey… OK, waxaan tababar la qaadanayay koox isku diyaarinta xilli ciyaareedka kahor laakiin haatan waa ay dhammaatay taas. Haatan waan soo toosaa, keligay ayaa tababar qaata oo waxaan helay dhiirrigelintaas.’
‘ilmahayga ayaa mararka qaar i weeydiiya ‘maxay u jirin koox adiga kusoo dalbata?.’
‘Waqti intee le’eg ayaan idhaahdaa,‘ way ku filan tahay? ’Ma aqaan, si aan daacad u ahaado.’
Laakiin Saka ayaa sheegay in Wilshere uu ‘dhiirigelin’ u ahaa ciyaartoyda da’da yar ee Arsenal wuxuuna ku taageeray ciyaaryahanka khadka dhexe inuu soo kabsado.
‘Waxaad dhammaanteenna, kuwa jooga Hale End na tustay suurtogal inay ahayd inaan Arsenal ka cayaarno, micno malahan waxa jira, xusuusnoow sidda dheer ee aan kaaga fikirno! Marwalba dhiiregelin ayaad noo tahay! Waad soo laabanaysaa @Jackwilshere ’ Saka ayaa kusoo qoray Instagram-ka.